✨Best hotel in Yangon✨ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon တွင် တည်းခိုနေစဉ်ကာလအတွင်း ရရှိခံစားခဲ့ရသော အတွေ့အကြုံကောင်းများကို ယခုလို Tripadvisor မှာ ပြန်လည်မျှဝေပေးလို့ “Mackie H” ကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင...
Gift Vouchers 💌 For unique experiences and special offers! ချက်ထရီယမ်ဟိုတယ်မှာ ကိုယ်ချစ်ရသူတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာ အချိန်တွေ ဖန်တီးဖို့လား...❓ လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်လား...❓ ဒါဆိုရင်တော့ ပုံမှန်ဈေးထက်...
💦Come and dive in!💦 Are you ready to get back in the pool and gym? ချက်ထရီယမ်ရေကူးကန်နှင့် အားကစားခန်းမကို လွမ်းနေကြပြီလား? With things rapidly improving around the world, our beautiful tropical p...
Chatrium Gastronomic Recommendation! (English Below) ဒီတပတ်မှာတော့ ချက်ထရီယမ်ဟိုတယ်ရဲ့ Kohaku ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်က စားဖိုမှူးကြီး မစ္စတာ ပီချိုင်း စိုင်းသစ် က Beef Tenderloin Teppanyaki ဂျပန်ဟင်းလျာက...
As cleanliness is our culture, I do love cleaning and sanitizing in every corner.✨ And you? Please share your daily activity with us.🙆‍♀️ Haveagreat week ahead!🙌 #LoveChatrium #LoveMyHotel #Clea...
Chatrium Fitness Center in your #Home 💪 Are you ready to work your body hard today? Get your biceps and triceps looking amazing with Gary’s Freestyle Sunday session and feel great! ဒီတပတ်တနင်္ဂနွေန...
Are you seekingacasual workplace in town while you're savoring decent meals? 🧐 Come down to the Lobby Lounge, boost your energy and make your task much more productive.☕️🍝 Photo Courtesy: @vivian_...
Chatrium Fitness Center in your #Home “Full-body Cardio Saturday with Gary" Don’t let Saturday beatime to slack off! Get up and join us today’s class of full-body cardio workout with Gary! 🙋‍♂️🏅 ဒ...